Sir Alex Ferguson Oo Magacaabay Xiddiga Xaqa U Leh Abaal-marinta Ballon D'Or - Laacib
Sir Alex Ferguson Oo Magacaabay Xiddiga Xaqa U Leh Abaal-marinta Ballon d’Or
Tartanka loogu jiro abaal-marinta xiddiga adduunka ee allon d’Or wali wuu furan yahay, waxaana uu u dhexeeyaa 30 ciyaartoy oo la kala saari doono dhamaadka bisha November.
Lionel Messi, Karim Benzema, Jorginho, Robert Lewandowski iyo N’Golo Kante ayaa ka mid ah ciyaaryahannada ku jira xayndaabka ee loo saadaalinayo abaal-marintan, laakiin Cristiano Ronaldo ayaa isaguna dooddiisa caddaysanaya oo sii wata gool-dhalin aan xad lahayn iyo bandhig wanaagsan.
Xiddiga reer Port8ugal ayaa toddobaadkan dhaliyey saddexlaydiisii 58aad ee intii uu garoomada ku jiray, waxaana uu qaadanyaaa sannad uu jabiyey rikoodho badan isagoo ku dagaallamaya inuu hantiyo Ballon d’Or markiisii lixaad.
Afar sannadood oo isku xigay oo uu Lionel Messi ku guuleystay abaal-marintan, Ronaldo ayaa 2013 boodhka iska jafay oo soo afjaray xidhiidhkii guulaha ee Leo, waxaana uu hantiyey Ballon d’Or-ka markiisii labaad, isaga oo waxyar kaga guuleystay Frank Ribery iyo Lionel Messi.
Sannadkan ayaa la sugayaa ciyaartoyga ku guuleysan doona iyadoo codbixintana lasii diyaarinayo qaabka ay u dhacayso.
Si kastaba, tababarihii hore ee Manchester United ee Sir Alex Ferguson ayaa sheegay ciyaartoyga u qalma in la siiyo abaal-marinta sannadkan, waxaanu yidhi: “Cristiano ayaa u qalma. Sannadkan wuxuu jabiyey rikoodhba rikoodhkii ka dambeeyey.”
Xaflad lagu qaban doono magaalada Paris ayaa waxa lagu shaacin doonaa ciyaartoyga ku guuleysta Ballon d’Or lagaga dhawaaqi doonaa November 29.